Cover Fire: offline shooting games 1.15.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.15.2 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Cover Fire: offline shooting games
Cover Fire: offline shooting games ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်အကောင်းဆုံးအော့ဖ်လိုင်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာ Tetracorp ကနေအကြမ်းဖက်သမားဆန့်ကျင်နေတဲ့စစ်ရန်သင့်အဖွဲ့သည်ဦးဆောင်လမ်းပြ။
Wi-Fi နှင့်အတူအခမဲ့ Download လုပ်များနှင့်အော့ဖ်လိုင်းကင်ပိန်းကစား။ သင့်ရဲ့သေနတ်ယူပါနှင့် battefield အတွက်ရိုက်ကူး။
ဖုတ်ကောင်စစ်တိုက်: သစ်ကိုအော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ရပ်စမ်းကြည့်ပါ! သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်အသကျရှငျမဆိုဖုတ်ကောင်မချန်မထားကြဘူး !! ရှင်သန်မှုအရေးပါပါ!
နယူးအရေးယူမုဒ်: Sniper Elite ။ အချိန်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း, အချိန်ကိုထွက်ပြေးအားလုံးရန်သူများကိုနှိမ်နင်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုပစ်မှတ်ရှင်သန်3စက္ကန့်ကထပ်ပြောသည်
- အော့ဖ်လိုင်း Play ။ ကျနော်တို့ဂိမ်း (400mb) ကို download လုပ်မယ့် Wi-Fi အကြံပြုသော်လည်း, သင်သည်ကစားရန် wifi မလိုအပ်ပါဘူး။
- တစ်ဦးကနယူး 3d FPS သေနတ်သမားအတွေ့အကြုံကို။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စနိုက်ပါနဲ့တူတော်လှန်ရေးနှင့် command ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အရေးယူနှင့်ရှေ့တန်းအပေါ်ဆက်လက်ရှင်သန်။ အထူးတခုခုအတွက်သတ်ပစ် shoot နှင့်ဤအော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများကို 2019 ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်!
- သင်ကပျော်စရာနှင့်အစွဲလမ်းတိုက်ခိုက်ရေးဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းခေတ်သစ်ထိန်းချုပ်မှု။ ဒီစစ်ပွဲ၏ဒေါသအရှိန်ကိုသတ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိဖို့ shoot! သငျသညျလူအချွေတာ၏တာဝန်များအတွက်ခေါ်ဆိုခကိုလက်ခံရရှိ
- အဗဒ္ဒုန်ပွိုနှင့်အတူ HD Graphics ။ ရဟတ်ယာဉ်များ, ထိန်းချုပ်မှုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ, ရှာရာဇဝတ်ကောင်, ဓားစာခံ, စသည်တို့အပေါ်မစ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့မီးရထားကိုကျော်ရိုက်ကူး
- တခြားလုပ်ကြံကစားသမားဆန့်ကျင်မဟုတ်သောရပ်တန့်အရေးယူမှုနှင့်အတူရိုက်ကူး, အွန်လိုင်းပွို mode မှာအကောင်းဆုံးစနိုက်ပါဖြစ်လာ။
- ကြီးမားတဲ့အစစ်အမှန်အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ထောက်ပံ့။ သင်တို့သည်ဤမျှလက်တွေ့သေနတ်တခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူး: ပစ္စတို, သေနတ်များ, ရိုင်ဖယ်, စနိုက်ပါ ... အမှန်တကယ်ရှေ့တန်းကွန်မန်ဒိုများကဲ့သို့ခံစား!
- ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကနေစစ်မြေပြင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်။ လက်ရှိအချိန်၌သင်တို့၏ကြေးစားအကြား alternate, စစ်တိုက်ရာတွင်အနိုင်ရအဆုံးစွန်ပေါင်းစပ်ရှာဖွေပါ။
- သူတို့ရဲ့ထူးခြားသောစွမ်းရည်များနှင့်အတူသင့်ရဲ့လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ကစားသမားကိုတက် Set: ဟက်ကာ, လက်ဖြောင့်, ချေမှုန်းရေးလူကို ... အ bazooka လူဒါမှမဟုတ် gunslinger တူသောသစ်ကို Epic စနိုက်ပါနဲ့ shooters Unlock! သငျသညျအစဉျအမွဲစစ်မြေပြင်တခုတခုအပေါ်မှာငွေဒိုင်နိုဆောမြင်ပြီလော
စစ်တိုက်ခြင်းငှါများ၏ထိန်းချုပ်မှု -Take နှင့်အများဆုံးစွဲလမ်းစနိုက်ပါ fps ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာထိပ်ဆုံး 3d သေနတ်သမားဖြစ်လာသည်။
ယခုအခမဲ့ app ကို Download လုပ်ပြီးန့်အသတ်အခမဲ့ updates များကိုလက်ခံရရှိ!
ဖုံးမီးဘေး (CoverFire) တွင်သင်သည် sieged မြို့ကြီးများ, သဲကန္တာရများနှင့်ပြောက်ကျားများကခေါ်ဆောင်သွားလယ်ကွင်းမှတဆင့်စစ်ပြန်တစ်ဦးကစားသမားဦးဆောင်လမ်းပြသူသေနတ်သမားဖြစ်နှင့် Hitman အပေါငျးတို့သမျိုးကိုအနိုင်ယူနှင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂိမ်း၌ဤစစ်ပွဲရှင်သန်မှုဂိမ်းအတွက်ဓားစာခံအနေဖြင့်သားကောင်များကိုခုခံကာကွယ်ပါလိမ့်မယ် ။
ပုန်ကန်၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်, သငျသညျရနျသူကော်ပိုရေးရှင်း၏ဗိုလ်ခြေရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်: အထက်တန်းလွှာစစ်သားများ, သေစေလောက်သောအထူးယူနစ်, ပိတ်ဆီးနေသောဒိုင်းနှင့်အတူ mechs, အစွမ်းထက်င့်ကားများ ... စစ်မြေပြင်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူ, တစ်ဦးကိုမှန်ကန်စစ်စက်အဖြစ်ပဋိပက္ခနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ အများဆုံးစွဲလမ်း fps multiplayer ၌ဤကမ္ဘာကြီးစစ်ပွဲ၏ဒဏ္ဍာရီဖြစ်လာသည်။
- အခမဲ့သေနတ်သမားများနှင့်လက်ဖြောင့်အတွေ့အကြုံကို။ , အဖုံးကိုယူရည်ရွယ်ထားနှင့်ပစ်သတ်။ အကြမ်းဖက်သမားတွေအစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးအခမဲ့ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာကမ္ဘာကြီးပိုင်ဆိုင်မသွားပါစေနဲ့!
- စိန်ခေါ်နေ Story mode ကို။ Tetracorp ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်သည်မစ်ရှင်အပေါ်တစ်ဦးကြေးစားအဓိကရုဏ်းဦးတည်သွားစေ။ အစဉ်အဆက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်အသစ်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း။
- သေနတ်သမားဂိမ်းထဲမှာထူးခြားတဲ့သစ်ကိုအတှေ့အကွုံခံစားရ။ ကိုဖွိုဖကျြပွီးသငျ့အစွမ်းထက်လက်နက်နှင့်သေနတ်များနှင့် sharpshooters သင့်ရဲ့ကောင်းမွန်စွာစုဝေးအသင်းနှင့်အတူအပေါငျးတို့သရာဇဝတ်ကောင်ဖကျြဆီး!
အဆမဲ့သေနတ်သမား fps အရေးယူဂိမ်း! ယင်းတော်လှန်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ဖုံးမီးဘေး (CoverFire) မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: https://generagames.com/terms-of-service/
Cover Fire: offline shooting games အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cover Fire: offline shooting games အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cover Fire: offline shooting games အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cover Fire: offline shooting games အား အခ်က္ျပပါ
hazel777 စတိုး 72.05k 40.69M
Cover Fire: offline shooting games ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cover Fire: offline shooting games အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.15.2
လက်မှတ် SHA1: 3A:3C:B3:C6:BC:48:63:3E:C2:0F:FC:A0:47:89:AA:79:A2:C8:58:28
ထုတ်လုပ်သူ (CN): davidlinan
Cover Fire: offline shooting games APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ